सुनको मूल्य प्रतितोलामै ३ सयले उकालो !::Nepal's Online News Portal
सुनको मूल्य प्रतितोलामै ३ सयले उकालो !
काठमाडौं । आज बुधबार सुनको मुल्य उकालो लागेको छ। मंगलबारको तुलनामा आज सुन ३ सय रुपैयाँले बढेको छ।
आज छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ६० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मुल्य पनि उकालो लागेको छ। आज तेजावी सुन ६० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ। हिजो तेजावी सुन ६० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
सुनको मुल्यसँगै आज चाँदीको मुल्य भने यथावत रहेको छ। आज चाँदी प्रतितोला ७४५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ।